Etu aga - esi ewepu Pesky -2 Issue na WordPress Slugs | Martech Zone
Enwere m olileanya na ọ bụghị naanị m na nke a na-enye nsogbu, mana m kpọrọ ya asị mgbe m tinye ngalaba na WordPress blog na URL ahụ wee ghọọ ihe dịka / udi-2 /.
Kedu ihe kpatara WordPress ji agbakwunye -2?
Mkpado gị, edemede, ibe na posts niile nwere slug nke ahụ akọwapụtara n'otu tebụl ebe ịnweghị ike ị nweta oyiri ọ bụla n'etiti mpaghara atọ ahụ. Ihe na - eme bụ na ị nwere ihuakwụkwọ, biputere ma ọ bụ mkpado nwere mpịakọta ka ị ghara iji ya dị ka otu ụdị slug. Kama ịgwa gị nke ahụ, WordPress naanị nọmba slug na -2. Ọ bụrụ na i mee ya ọzọ, ọ ga - agbakwunye -3, were gabazie. Slugs ga-abụrịrị ihe pụrụ iche na usoro njikwa ọdịnaya niile.
Nke a bụ nseta ihuenyo nke esemokwu na otu n'ime ndị ahịa anyị.
Kedu ka m ga - esi dozie -2?
Izizi, ichoro ichota ibe, ihe edeturu na nkpado maka aha slug ichoro. Ozugbo ịchọtara ya, ịkwesịrị idezi ibe ahụ, biputere na / ma ọ bụ mkpado iji wee wepụta slug dị iche. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ahụ ya dị ka mkpado ma wepu mkpado ahụ na nke ọ bụla. Iji mee nke a:
Pịnye ya slogu aha na anyị na-achọ n'ọhịa ọchụchọ na ibe mkpado.
Edepụtara ndepụta nke ejiri mkpado mee ihe ugbu a.
A na-egosipụta oke nke akara akara ejiri na aka nri nke mkpado ahụ.
Pịa na ọnụ ọgụgụ ahụ, ị ​​ga-enweta ndepụta nke ọ bụla n'ime posts ndị ejiri mkpado ahụ mee ihe.
Pịa Kpọrọ na post ọ bụla, wepụ mkpado, ma chekwaa post ahụ.
Laghachi na peeji mkpado, chọọ mkpado ahụ, ị ​​ga-ahụkwa na edepụtara mkpado ahụ na posts 0.
Ọ bụrụ na ọ bụ 0, hichapụ mkpado.
Ugbu a na mkpado na-ehichapụ, ị nwere ike imelite udi slug ma wepu -2.
Ebe ọ bụ na enwere ike ịdepụta ibe peeji nke saịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ, ị ga-achọ ịgbagharị URL ochie na -2 gaa na URL ọhụrụ na-enweghị ya.
Tags: udi slugihichapụ mkpadopeeji slugslugwepụ mkpadoslugsmkpado slugmelite slugWordPress